Amakhukhi we-Peanut Butter Cornflake (akukho kubhaka) - Ungadliwa
uphizi wamapentshisi ngeresiphi yamapentshisi afriziwe
inkukhu ala king iresiphi cooker slow
okuhamba kahle ngamasangweji kashizi owosiwe
kuphi ukuthenga okungu-7 ungqimba
i-spaghetti nama-meatballs ekanini
Amakhukhi we-Peanut Butter Cornflake (akukho kubhaka)
Amakhukhi we-Peanut Butter Cornflake ukwelashwa okulula futhi okumnandi ngaphandle kokubhaka okudingekayo! Wonke umuntu uzowathanda lawa makhukhi ahlafunayo, amnandi, nosawoti alungile ngesikhathi esithile!
indlela yokudla isaladi yesigaxa
Iningi labantu mhlawumbe okwamanje lizama ukuziphatha futhi linamathele ezinqumweni zabo zonyaka omusha, kodwa angiyena omunye wabo. Ngakho-ke kulabo kini, ngiyaxolisa kusengaphambili ngokunilinga ngalawa khekhe lamantongomane ahlafunayo futhi amnandi.
Ngokuzimisela, ngiyazi, kubonakala kungafanele neze kimi ukunquma iresiphi enjalo phambi kwakho ngenkathi uzama ukuba muhle, kepha lokhu kuhle kakhulu ukuthi ungabelani ngakho! Njengokulutha okuhle!
Ngingumlandeli omkhulu wama-cookies angenamakhekhe, umama wawenza ngaso sonke isikhathi lapho sikhula futhi ngiyaqhubeka nokuwenza ngamathani ezinhlobonhlobo ezahlukene namhlanje, njenge I-Irish Cream No Cookies Amakhekhe noma yami Amabhotela Amakinati Awakho Amakhekhe Okubhaka .
Ngokwesiko, ngenza amakhukhi ami angabhaki nge-oatmeal base, kepha ngenxa yale iresiphi nginqume ukuzama okuthile okuhluke kakhulu, amaCorn Flakes! Akumnandi ngokwedlulele, lokhu ngababili besidlo sasekuseni okuyisicefe nebhotela lamantongomane elikhilimu ukudala ikhukhi elimnandi futhi elinosawoti ngokumangalisayo!
banana pudding cake recipe ku facebook
Zibuye zi-SUPER zihlafune futhi umyeni wami uzithanda kakhulu ukudlula okwakudala. Eqinisweni, ngimpakishele inqwaba yenqwaba ukuthi ayisebenzise futhi abakaze bayenze ngoba ulokhu eba amakhukhi esitsheni futhi akusekho okwanele ukwaba!
Le recipe yenziwa ngezithako ezi-5 nje kuphela: ibhotela lamantongomane, ama-flakes ommbila, ushukela, isiraphu yamabele, ne-vanilla. Zenziwe phezulu esitofini futhi zilungile ngemizuzu, futhi ngiyathembisa ukuthi wonke umndeni ngeke ukwazi ukuthola okwanele kuzo!
Amakhukhi we-Peanut Butter Cornflake
Isikhathi sokulungiselelaishumi nanhlanu imizuzu Isikhathi Sokupheka0 imizuzu Isikhathi Esipheleleishumi nanhlanu imizuzu Izinkonzo18 amakhukhi UmbhaliURebecca Hubbell Amakhukhi we-Peanut Butter Cornflake ayindlela elula futhi emnandi ngaphandle kokubhaka okudingekayo! Wonke umuntu uzowathanda lawa makhukhi ahlafunayo, amnandi, nosawoti alungile ngesikhathi esithile! Phrinta Phina
▢1 inkomishi ushukela ogqamile
▢1 inkomishi isiraphu yommbila elula
▢6 izinkomishi ama-corn flakes
Epanini elikhulu, hlanganisa ushukela, isiraphu yamabele, nebhotela lamantongomane. Pheka ngokushisa okuphezulu okuphakathi kuze kube yilapho isikhungo siqala ukubilisa, qiniseka ukuthi uvusa njalo ukuze ushukela ungashi.
Ngokushesha nje lapho ingxube kashukela ifika emathunjini, susa emlilweni bese ugovuza kukhishwa i-vanilla namakhokho ommbila, hlanganisa kuze kube yilapho amaqebelengwane ommbila esongwe ngokulinganayo enhlanganisweni kashukela.
Sebenzisa i-ice cream scoop ukulahla amakhukhi esikhumbeni noma ephepheni le-wax ngokushesha okukhulu ngaphambi kokuba ingxube iqale ukuphola nokuqina.
Vumela ukupholisa ephepheni le-wax imizuzu engama-20 kuya kwengama-30 ngaphambi kokujabulela.
Imininingwane yokudla okunikeziwe ukulinganisela futhi iyohluka ngokuya ngezindlela zokupheka kanye nemikhiqizo yezithako ezisetshenzisiwe.
Amakholori:214,Amakhabhohayidrethi:36g,Amaprotheni:4g,Amafutha:7g,Amafutha agcwalisiwe:1g,I-Sodium:145mg,Potassium:108mg,Umucu:1g,Ushukela:27g,Uvithamini A:165IU,Uvithamini C:ezimbilimg,I-calcium:9mg,Insimbi:3mg
ipani elikhulu lokuwosa nge-rack nesembozo
Igama elingukhiyeamakhukhi we-cornflake InkamboUgwadule KuphekiweWaseMelika© SpendWithPennies.com. Okuqukethwe nezithombe kuvikelwe i-copyright. Ukwabelana ngale recipe kuyakhuthazwa futhi kuyaziswa. Ukukopisha kanye / noma ukunamathisela izindlela zokupheka ezigcwele kunoma iyiphi imithombo yezokuxhumana akuvunyelwe nakancane. Sicela ubuke inqubomgomo yami yokusebenzisa izithombe lapha .
I-Easy Chocolate Peanut Butter Fudge
Amakhukhi weNdebe Yebhotela Le-Double Chocolate
ama-meatballs amnandi futhi anomuncu nge-cranberry sauce
Awekho amaKhukhi we-Bhaka Chocolate (Amantongomane Mahhala)